China 3-Indolebutyric Acid (IBA) orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Lemandou
CAS No. 133-32-4 Milanja molekiola 203,24
molekiolan'ny C12H13NO2 Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy
fahadiovana 99,0% min. Teboka mitsonika 123-125 ºC
Ny asidra 3-Indolebutyric dia ampiasaina amin'ny fanapahana fakany, izay mety hitaona ny fananganana root protozoa, hampiroborobo ny fanavahana ny sela sy ny fizarazarana, hanamorana ny fananganana faka vaovao sy ny fanavahana ny rafitra fambolena vaskola, ary hampiroborobo ny famoronana fakan-kazo amin'ny fanapahana. Ampiasaina be izy io amin'ny fanapahana hazo sy voninkazo.
Ny asidra 3-Indolebutyric dia afaka mampiroborobo ny fizarazaran-sela sy ny fitomboan'ny sela, mitaona ny famoronana fakany adventitious, mampitombo ny fametrahana voankazo, misoroka ny fihenan'ny voankazo ary manova ny tahan'ny vehivavy amin'ny voninkazo lahy. Izy io dia afaka miditra amin'ny vatan'ny zavamaniry amin'ny alàlan'ny ravina, ny hoditry ny rantsany sy ny masomboly, ary entina mankany amin'ilay ampahany mavitrika miaraka amin'ny fikorianan'ny otrikaina.
Fampiharana asidra 3-indolebutyric: Ampiasaina matetika amin'ny fanapahana rooting root, fa koa amin'ny fanosehana, fanondrahana rano mitete, synergist zezika manondraka, synergist zezika zezika, mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry, ampiasaina amin'ny fizarana sela sy fitomboan'ny sela ary mampiroborobo ny fakan'ny anana sy zavamaniry hazo. izany
3-Ny asidra Indolebutyric dia mpanentana ny fitomboan'ny zavamaniry. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fanondrahana faka sy famindrana zavamaniry hazo sy ahitra. Izy io dia afaka manafaingana ny fitomboan'ny faka ary mampitombo ny tahan'ny fakan'ny zavamaniry. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fandemana sy ny fitafiana masomboly zavamaniry. Ny fifantohana avo lenta amin'ny IBA dia afaka mampiroborobo ny fihanaky ny vaksinin'ny kolontsaina sasany
Manaraka: 6-Furfurylaminopurine (Kinetin)